मन्दिरमा आशिर्वाद संगै ऋण पनि ! - Medianp.com
मन्दिरमा आशिर्वाद संगै ऋण पनि !
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ०७, २०७४१३:२८0	एजेन्सी, हामी सबैलाई थाहा छ मन्दिरमा हामी प्रार्थना गर्न जान्छौँ । मनले चाहेको कुरा आशिर्वादको रुपमा प्राप्त होस् भनेर हामी मन्दीर जाने गर्छौँ । तर दुनियामा यस्ता पनि मन्दिर पाइँदोरहेछ । जहाँ आशिर्वाद मात्र होइन ऋण समेत पाईन्छ ।
सुन्दै अनौठो लाग्ने ऋण पाईने मन्दिर हाम्रै छिमेकी भारतमा छ । भारतको देवभूमि हिमाञ्चलमा धेरै मन्दिरहरु छन् । ति मन्दिरहरुमा आशिर्वाद मात्र होइन ऋण समेत पाईन्छ । यो मन्दिर शिमला, सिरमौर, किन्नौर लाहैल स्पीतिमा छ ।
यी मन्दिरहरुमा मानिसले चाहेमा ऋण पाईन्छ । यो सदियौँ पुरानो परम्परा हो । यहाँ एक वर्षको लागि ऋण पाईन्छ । त्यो ऋणको २ देखि ३ प्रतिशत सम्म बार्षिक व्याज तिर्नुपर्छ ।
यदि कसैले विभिन्न कारणले ऋण र्नि नसकेमा केही समय माफ पनि मिल्छ । मन्दिरका प्रवन्धकले ऋणको निवेदन लिने वा नलिने निर्णय गर्दैनन् । उनले ऋण लिएर तिरे नतिरेको समेत रेकर्ड राख्दैनन् । यो मन्दिरमा सबैको यस्तो आस्था छ की भगवानलाई कसैले धोका दिँदैन र दिनुहुँदैन ।मन्दिरले नगद मात्र ऋण दिँदैन, अन्न पनि लिने तथा दिने गर्छ । भक्तले नगद ऋण भए नगद र अन्न ऋण भए अन्न तिर्नुपर्छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा विस्फोट गर्न नमिल्नेवार्षिक पाँच करोडको च्याउ बिक्री
कस्तो अचम्म ! फोटोकपी जस्तै यी बच्चाहरु
सुन्दर हुनुपनि अभिशाप ! सरकारले नै लगायो चलचित्र खेल्न प्रतिवन्ध
भेटियो दुई शीर ३ आँखा भएको अनौठो किरा
सेक्स पावर बढाउनका लागि भन्दै बच्चाको मासु बिक्री गरिँदै !
बाफरे ! ३७ वर्षमा ३८ बच्चा जन्माइन् यी महिलाले
अब गाडीले हैन सडकले बनाउने छ हर्न !